I-imeyile yeVidiyo: Lixesha lokuThengisa ukuze ufumane ubuqu | Martech Zone
I-imeyile yeVidiyo: Lixesha lokuThengisa ukuze ufumane ubuqu bakho
NgoMvulo, Matshi 23, 2020 Lwesine, Disemba 30, 2021 Douglas Karr
Ngengxaki ye-COVID-19, ukubanakho kwamaqela angaphandle okuthengisa ukugcina unxibelelwano lomntu kunye nethemba labo kunye nabaxhasi bapheliswa kwangoko. Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ukuba ukuxhawulana yinto ebaluleke kakhulu kwinkqubo yentengiso, ngakumbi ngokuzibandakanya okukhulu. Abantu kufuneka bakwazi ukujongana emehlweni kwaye bafunde ulwimi lomzimba ukuze bafumane ukuzithemba kutyalo-mali abalwenzayo kunye neqabane abalikhethayo.
Ukwenza izinto zibe nzima, ikamva loqoqosho lwethu lusengxakini. Ngenxa yoko, amaqela okuthengisa ayasokola ukuvala izivumelwano… okanye afune ukuba iinkampani ziphendule. Ndisebenza kuqaliso ngoku ngamakhulu amawaka eedola ezazomelele kumbhobho ... kwaye isivumelwano sethu sokuqala siwubuyisile umhla. Ngenxa yokuba sinceda iinkampani ezenzekelayo kunye nokudityaniswa, lixesha elinzima ukusukela Siyazi ukuba singabanceda.
Ividiyo yamaQonga okuThengisa
Oko kwathethi, siyaphumeza izisombululo email ividiyo ukunceda amaqela ethu okuthengisa ngokuphucula ukuzibandakanya kwabo nethemba kunye nabathengi ngokufanayo. Ividiyo ayithelekisi nomntu, kodwa inika ithuba lokuzibandakanya ekuthetheni buqu kwithemba okanye kumthengi.
Umboniso weqonga lokuthengisa unezinto ezithile eziqhelekileyo:
irekhodi -Rekhoda iividiyo ezenzelwe wena nge-desktop, iplagi yesikhangeli, okanye usetyenziso lweselfowuni.
Umdibaniso weCRM -Rekhoda i-imeyile ukukhokela, unxibelelwano, iakhawunti, ithuba, okanye ityala.
UPhuculo -Hlela iividiyo kwaye ungeze ukugqalwa kunye nokuhluza.
Izaziso - jonga ukubandakanyeka kwevidiyo yokwenyani kwaye ufumane izilumkiso.
amaphepha Ukudityaniswa kwephepha lokufika ukuze ujonge kwaye uphendule ividiyo. Abanye bade babe nokudityaniswa kwekhalenda yokucwangcisa ixesha lokuqeshwa.
ingxelo -Linganisa ukusebenza kweNgxelo yesiqhelo kunye neeDashboard.
Nanga amaqonga athandwayo:
BombBomb -Khawuleza kwaye ngokulula urekhode, uthumele, kwaye ulandele ii-imeyile zevidiyo ukuba zivele kubathengi bakho ', kubathengi' nakwibhokisi yebhokisi engenayo.
Covideo -Rekhoda kwaye uthumele iividiyo ezenzelwe wena eziphucula amaxabiso okuphendula, zonyuse amathuba okuthengisa kwaye uvale ezinye izivumelwano
I-Dubb -Khulisa ishishini lakho ngamaphepha evidiyo anokusebenza anokuthunyelwa naphina ngokujonga kuqala kwe-GIF.
Ukuqhawula -Ukuthumela iLoom kusebenza ngakumbi kunokuchwetheza ii-imeyile ezinde okanye ukuchitha usuku lwakho kwiintlanganiso ezineencoko ezingafuneki zenzeke ngexesha lokwenyani.
OneMob -Yila ngokukhawuleza amaphepha omxholo ukuze Ba ndakanye amathemba, abathengi, amaqabane kunye nabasebenzi
Ukufikelela -I-vidREACH yi-imeyile yevidiyo eyenzelwe wena kunye neqonga lokuzibandakanya lokuthengisa elinceda amashishini ukuba abandakanye abaphulaphuli bawo, angenise izikhokelo ezingaphezulu kwaye avale amadili amaninzi.
Ividiyo yeQhinga lokuThengisa
I-inbox yomntu wonke iphakanyisiwe phezulu ngoku kwaye abantu banexesha elinzima lokucoca izinto ezinokuthi zibonelele ngexabiso lomsebenzi wabo. Nalu uluvo lwam malunga nokusebenzisa ividiyo kwintengiso:
Umgca weSifundo - Beka yokuzonwabisa kumgca wesifundo sakho kunye nexabiso oza nalo.
Mfutshane - Sukuchitha ixesha labantu. Ziqhelanise nento oza kuyithetha kwaye ufike ngqo kwinqanaba.
Nika ixabiso - Kula maxesha ungaqinisekanga, kuya kufuneka ubonelele ngexabiso. Ukuba uzama nje ukwenza intengiso, awuzukuhoywa.
Nika uNcedo -Nika ithuba lokuba ube nethemba okanye umthengi alandele.
izixhobo Sebenzisa ikhamera yewebhu elungileyo kunye nemakrofoni. Ukuba awunayo imakrofoni elungileyo, iseti yentloko iya kuhlala isebenza.
Ividiyo eshukumayo -Ukuba urekhoda ngeselula, zama ukurekhoda kwimowudi yokuma komhlaba kuba abantu bazakuvula oku kwi-imeyile yabo, ngokunokwenzeka kwidesktop ukuba bakwiofisi yabo yasekhaya.
Nxiba ngempumelelo Ukubila kunye neebhulukhwe zeyoga kunokuba yeyona nto inxibe iofisi yasekhaya, kodwa ukuze ungazithembi, lixesha lokuba uhlambe, uchebe kwaye unxibe ukuze uphumelele. Iya kukwenza uzive uzithembile kwaye umamkeli wakho uya kufumana imbonakalo entle.
imvelaphi - Sukuma phambi kodonga olumhlophe. Iofisi enobunzulu obunemibala efudumeleyo ngasemva kwakho iya kumema ngakumbi.
Ukubhengeza: Ndisebenzisa ikhonkco elidityanisiweyo kwezinye zezixhobo ezikweli nqaku.
tags: BombBombukudityaniswa kwekramonemobividiyo yokuthengisaividiyo yeqonga lokuthengisaividiyo kwi-imeyileUkudityaniswa kweYouTube
Fumana Impembelelo yakho: Yenza iincoko zehlabathi zikhokelwe nguMxholo ophefumlelweyo